Ducada Qofku ku dejiyo kuna dejiyo. ? (Gardaro iyo Cadho)
U soo ducee inuu qofku xasillo oo dib u xaqiijiyo qofka Waa muhiim maadaama aanan ogeyn waqtiga aan u baahanahay inaan sameyno.
Waqtiyo badan oo aan ku soconno ama aan la joogno reerka oo aan helno xaalado aan ugu baahanahay inaan dejino qof wax laga beddelay ama si fudud uga gudbaya baahi xagga diinta ah halkaas oo salaadda tahay tallaabada keliya ee lagu dabaqi karo dib-u-hubinta iyada, maxaa yeelay Taasi waa marka salaaddan ay muhiim noqoto.
Macno malahan hadii ay tahay qariib, salaadda Iyagu waa kuwo aad u awood badan meelkastana waa lagu qaban karaa.
Meesha aan joogno had iyo jeer salaadda waxay noqon kartaa hubkeena kaliya ee aan u adeegsan karno markasta oo aan iimaan qabno.
1 1) Ducada si loo hubiyo qof dagaal badan
2 2) Ducada si loo hubiyo qof xanaaqsan
3 3) Salaad si ay u dajiso murugada iyo cadhada lamaanaha
4 4) Salaad si loo dejiyo qof xanaaq badan
4.1 Goormaan tukadaa salaadda?
1) Ducada si loo hubiyo qof dagaal badan
Rabbiyow, naftaydu waa murugootay; cidhiidhi, cabsi iyo argagax ayaa i qabsaday.
Waan ogahay inay taasi u dhaceyso rumaysad darradayda, iyo ka tegid la'aanta gacmahaaga quduuska ah oo aanan gebi ahaanba ku kalsoonayn xooggaaga infinito. Rabbiyow ii dambi dhaaf iimaankadana ii siyaadi. Ha eegin rafaadkeyga iyo daneynteyda.
Waan ogahay inaan argagaxay, maxaa yeelay waxaan ku adkaysanayaa, darxumadayda aawadeed, inaan ku tiirsanaado xooggayga xun, kuwa xun, hababka iyo kheyraadkayga. Rabbiyow, i cafi oo i badbaadi, Ilaahayow.
Rabbiyow nimcada iimaanka isii; Waxay i siineysaa nimcada inaan Rabbiga ku kalsoonaado bilaa cabir, aniga oo aan qatar fiirin, laakiin adiga kaliya ku eegaya, Sayidow; I caawi, ilaahow!
Waxaan dareensanahay inaan ahay kali oo la iga tegey, oo ma jiro mid i caawin kara mooyee, xagga Rabbiga mooyaane.
Waxaan iskaga tagayaa gacmahaaga, Sayidow, iyaga dhexdooda ayaan dul dhigayaa ubucda noloshayda, jihada socodkeyga, natiijooyinkana gacmahaaga ayaan uga tagayaa. Adaan ku aaminsanahay Rabbi, laakiin iimaankayga kordhi.
Waan ogahay in Rabbiga sara kacay uu dhinacayga ku socdo, laakiin sidoo kale wali waan baqayaa, maxaa yeelay gebi ahaanba iskama dayri karo gacmahaaga. Caawi daciifnimadayda, Sayidow.
Tukashadan si loo dejiyo oo loo hubiyo qof waa runtii awood badan!
Waqtiyadan waxay noqon kartaa wax caadi ah in la arko dadka oo xanaaqsan Waxay u muuqdaan inay sugayaan xaalad kasta oo ay ku qarxdo gardarada.
Xaqiiqdi waxaan la kulanay xaalado dagaal oo dagaal loo arki karo inuu yahay mid halis ku ah nolosheena ama dadka kale ee nagu xeeran waana waqtigaas marka salaadu ay tahay magan galyada ugu sareysa halkaasoo dagaalku uusan qeyb ka aheyn.
2) Ducada si loo hubiyo qof xanaaqsan
«San Miguel weyn
Taliyaha xoogga leh ee ciidammada Rabbiga
Adiga oo marar badan sharrowga ka adkaaday
Waana garaaci doontaa markasta oo aad rabto
Xumaanta oo dhan iga fogee
Cadow kasta oo iskudaya inuu ka hor tago daacadnimadayda
Oo xasiliya kuwa weli ku jira noloshayda
Sii nabad iyo xasillooni
Tus habka ay u socdaan
Cadhada waa mid ka mid ah shucuurta aan bini'aadamka leenahay oo ay adag tahay in la xakameeyo, gaar ahaan waqtiyada xanaaqyada halkaas oo aan weydiin weyneyn waxa aan sameyno ama waxaan dhahno.
Waan awoodnaa inaad la kulanto dadka xanaaqsan si joogto ah xanaaqaasi wuu qarxin karaa daqiiqad kasta, annaga oo aan aragno markay soo socoto iyo iyadoo aan awoodin inaan wax qabanno si aan uga hor tagno.
Si kastaba ha noqotee, markii aan aqoon u lahayn adduunka ruuxiga ah ee nagu xeeran, waxaan awood ku yeelan karnaa xaaladahaas annaga oo si fudud u soo qaadna jumlad. Qofka xanaaq dareemaa jidhkiisa ayuu dareemi karaa sida waxkasta u socdaan, waana ilaahay inuu bilaabo inuu gacanta ku dhigo ficiladiisa si cadhadu aysan mar dambe u xakamayn.
3) Salaad si ay u dajiso murugada iyo cadhada lamaanaha
«Malaa'igta qaaliga ah, jannada, rabaaniyiinta iyo aadanaha xoogga badan ee shaqada Ilaah
Kuwiinna jacaylka ah oo jacaylka sii
Waxay u dhasheen inay gutaan waajibaadkooda ilaa hadda ma aysan guuldarreysteen
Iga caawi inaan ka gudbo dhibaatadan.
Iga caawi in isaga / iyadu ay i fahmaan
Faham dhibaatooyinkeyga, si aan u fahmo waxaaga
Faham dhibaatooyinkeyga, si aad u fahanto waxaaga
Isaga ha ii dhiibo oo ha ila hadlo, si aan u bixiyo oo u jeclaado
Naga caawi inaan ka adkaano dhibaatadan halista ah
Malaa'igta sharafta leh, waxaad tihiin nuurkayga
Hagahayga, iyo rajadayda
Waxaad tahay xalka aniga«
Salaaddan si loo dajiyo murugada iyo xanaaqa lamaanaha ayaa loo isticmaali karaa waqti kasta iyo duruufahaba.
Tusaale ahaan, qofka aad u xanuun badan oo jidheed ama nafsad ahba wuu xasili karaa ka dib markii la helo salaaddahan midkood.
Xusuusnow in waqtiyada murugada ama marka jidhka bini aadamka iyo maskaxdiisa ay si aan caadi ahayn u carqaladeeyaan, salaadu waa kheyraad aan isticmaali karno oo aan ognahay inaan wax ku oolno waqti kasta iyo meel walba.
4) Salaad si loo dejiyo qof xanaaq badan
«Sayidow, waxaan ku ridaa cadhada iyo qadhaadhka aan inta badan qalbigayga ku hayo cagahaaga waxaanan ku baryayaa in nimcadaada aad ku soo bandhigto wax kasta oo sababa sunta qadhaadh ee qalbigayga marar badan dul taal, oo xor ah aniga iga
Sayidow, waan qirayaa cadhadayda iyo qadhaadhka oo dhan waan ogahay in markaan u oggolaado tan inay qalbigayga ku weynaato, inay jabinayso wadajirka aan wada leennahay.
Waan ogahay markaan qirtay cadhadayda, inaad aamin tahay oo qumman tahay inaad cafiyo xumaanta xanaaqa qalbigayga iyo inaad iga nadiifiso xumaanta oo dhan oo aan magacaaga ku ammaani doono.
Laakiin, Rabbow, waxaan jeclaan lahaa inaad iga sii daayo wasakhowgan qalbigayga ku jira, in xididka xanaaqa uu naga dhex baxo, waxaanan kaa codsanayaa inaad i baadho oo aad iska fogeyso wax kasta oo aan indhahaaga ku jirin.
Mahadsanid magaca ciise,
Marar badan raaxo-darrada maalinba maalinta ka dambaysa waxay ku urursataa jidhka iyo nafta illaa daqiiqad ka soo baxdo oo umuuqda inay ka gudubayso xaddidaadda wax walbana wuu qarxaa, waxaan lumineynaa xakameynta nafteena waxaanan ku qaban karnaa wax kasta oo waalan.
Dhex dhexaadinta wakhtigaas salaaduhu waa muhiim maxaa yeelay waxaan ka faa'iideysan karnaa waqtigan aan u baahanahay iyo dhibkasta oo aan hareeraha nahay. Salaaduhu waa qalab ruuxiyadeed oo had iyo jeer diyaar noo noqon doona.
Salaadaha waa la samayn karaa markasta oo loo baahdo.
Waxaa jira kuwa sida caadiga ah meel gooni ah u qoondeeya qadarka maalinlaha ah ee la tukado, laakiin xaaladahaas oo ah halka salaadaha looga baahan yahay, waa la qaban karaa maadaama ay yihiin kheyraadka kaliya ee aan adeegsan karno
Waxaan ku duceysan karnaa qoyska ama aan la shaqeyno asxaabta, laakiin waxaa fiican in waqti yar la qaato oo aan ku duceysano maxaa yeelay taasi waa meesha qalbigeennu ka furmo Rabbiga hortiisa oo aan la hadli karno isaga.
Macno malahan hadii aan shumaca isticmaaleyno, hadaan u ciyaarno muusig jilicsan ama muusig ah, waxaan u qabanaa aamusnaan ama cod dheer, waxa ugu muhimsan waa salaada inay run tahay, inay ka timaada qoto dheer oo qalbigeenna iyo in lagu sameeyo iimaan, Waxaan ognahay inuu Ilaahay ina maqlayo oo uu diyaar u yahay inuu ka jawaabo waxa aan dalbanayno.
Ka faa'iidayso awooda u ducee si aad u dejiso oo aad u xaqiijiso qofka. Insha Allah la joog